एकदम सही गर्नुभयो माधव कमरेड, बल्ल हाम्रो संगतमा आउनुभयो : सूर्य थापा – हाम्रो देश
एकदम सही गर्नुभयो माधव कमरेड, बल्ल हाम्रो संगतमा आउनुभयो : सूर्य थापा
काठमाडौं, ३१ बैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले माधव नेपालले सही कदम चालेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले नेता नेपाल बल्ल आफूहरुको संगतमा आएको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन् । थापाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालबीचको हिजोको भेटवार्ताको तस्विरलाई विशेष क्षण भन्दै सेयर गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन्-“विशेष क्षण – पुष्पकमल दाहालले आफ्नाे गुटकाे स्थायी कमिटी बैठकमा हिजाे भन्नुभएछ-“माधव नेपालजीले धाेका दिनुभयो, गठबन्धनको सरकार नबन्ने भयाे।” धाेका नै दिनुभएको हाे कि हाेइन? तर पाेजिसन चेन्ज गरेर हामी एमालेहरू भन्छाैं-एकदम सही गर्नुभयो माधव कमरेड! बल्ल तपाईं सही संगतमा आउनु भयाे।”